May 10, 2020 35675
पोखराको फेवातालमा शनिवार अनौठो घ ट ना भयो । फिल्ममा देखिने जस्तो घ ट ना कृष्ण वास्तोलाको जिवनमा भयो । पोखरा फेवा ताल नेपालको पर्यटकीय स्थल हो । अहिले लक’डाउनका कारण पर्य’टक छैनन् । वरपरका स्थानिय लकडाउनको समय’मा मन वहलाउन फेवा ताल पुग्छन् ।
कृष्ण पनि समयको सदुपयोग गर्न फेवाताल तिर गएका थिए । उनले टाढा प्रहरीहरुले तालवाट वेवारिसे ला स निकाल्दै गरे’को देखे । उनको मनमा फेवा ताल पछिल्लो सम’य यो आ त्म ह त्याको मुख्य स्थल त बनेको होइन ? भन्ने प्रश्न उठ्यो ।
उनले लगा’तार जस्तो यस्तो घ ट ना देखेका थिए । उनी को रहेछ बुझ्न पनि हुन्छ र प्रहरीलाई सहयोग पनि गर्छु भनेर नजिकै गए । ला स वाहिर निकाल्न प्रहरीलाई सघाए ।
आकासी रंगको टिसर्ट र खैरो पाइन्ट लगाएका ति युवाको पकेट’मा पर्स थियो । अनि अर्को पकेटमा मोवाइल पनि रहेको त्यहाँ उपस्थित ब्यक्तिहरुले भनेको भिडि’योमा सुन्न सकिन्छ । ति ब्यक्तिको परिचय पत्ता लगाउन पर्समा केही कागजात छ की भनेर खोजि गरेको पनि भिडि’योमा देख्न सकिन्छ ।
तर ति ब्यक्तिको श व वाहिर निकालेर पर्समा भएको परिचय पत्र हेरेपछि उद्दारमा रहेका कृष्ण अचम्म परे । उनी त आफ्नै आफन्त पो रहेछन् । आफ्ना कान्छा हजुरवुवाको छोरा राजु वास्तो’ला नाम गरेको परिचय पत्र उनको पकेटमा थियो ।
उनको पसल वाग्लुगं वस’पार्कमा रहेको र उनी ट्रयाकिगं ब्यवसायी रहेको उद्दारमा संलग्नले बताए । उनको परिवारमा राम्रो सम्बन्ध राम्रो नभएकाले आ त्म ह त्या गरेको हुनसक्ने अनुमान उनले गरे । उद्दार गरेर बाहिर निकाल्दा आफ्नै भाई नाता पर्ने देखि’एपछि उनले अन्य आफन्तलाई खबर गर्ने र प्रहरीलाई सहजीकरण गर्ने काम गरे ।
फेवातालमा बोट चलाउने’हरुले मु डा जस्तो दे:खेपछि के रहेछ भनेर बुझ्न जाँदा मानिसको श व देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । डुंगा चलाउनेहरुले पनि किनारमै श व देखेको बता’ए ।
कृष्ण वास्तोलाले राजु अघिल्लो दिन चार वजेदेखि हराएको आफुले जानकारी पाएको बताए । दुई वर्ष अगाडी देखि श्रीम’तीसंग सम्बन्ध राम्रो नभएपछि उनी केही समय ह रा एका पनि थिए ।
उनी आफु लकडाउन’का कारण खाली भ’एको र माछा मा र्न भन्दै आएको त आफ्नै भाईलाई मृ त देख्नुपरेको बताए । सुरुमा बाहिर निकालेर अनुहार हेर्दा अनुहार सुन्निएको कारण चिन्न नसकेप’छि परिचय पत्र देखेपछि आफ्नो भाइलाई चिनेको बताए । – नेपाल भाइराल न्युज बाट
Prevभारतीय नायिका अनुष्काले बोकेको यो ब्यागमा मूल्य थाहा पाउँदा छक्क पर्नुहुनेछ ! हेर्नुहोस् मूल्य सहित
Nextआज वैशाख २९ गते सोमबारको राशिफल हेर्नुहोस्